Ports of Trojans & Malwares — MYSTERY ZILLION
Ports of Trojans & Malwares
မနက်တုန်းကတော့ shoutbox မှာအော်ပြီးပြီ
ဒါက Trojans&Ports Lists တွေပါ
ဒါက Trojans Lists တွေပါ
Trojan list sorted on trojan file sizes
မိန်းကလေးတွေက ဘာလို့အထူးသတိပြုပြီးဖတ်ရမှာလဲဟင်။ အဲဒီ port တွေအကုန်လုံးအလွတ်ကျက်ထားရမှာလား။:2::2:
admin တွေကို inform လုပ်ပြီးပါပြီ
ကျွန်တော်လည်းသိချင်ပါတယ်ဗျား မိန်းကတွေကိုဘာဖြစ်လို့လဲဗျ တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပေးပါဗျား သိချင်လို့ပါ ဗျား အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါဗျား
ကို Info အသေးစိတ်ပြောပေးနော်။ ဘယ်နိုင်ငံကလဲပါပြောပေးနော်။ ဘန်းကျော်ကဆိုရင်တော့ ကြောတ်တယ် ကျန်တဲ့နိုင်ငံကဆိုရှိပစေတော့။
ရန်ကုန်မြို့ ရှိ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် တွင် trojan နှင့် keylogger များကို ဆိုင်ရှင်ပင်မသိပဲ တင်ထားပြီ။ password များခိုးယူကာ။
Information များ ဓါတ်ပုံများ ကိုမြန်မာ ပွန်းဆိုက်တစ်ခုတွင် တင်နေပါသည်။
ခေါင်း ဖြတ်ဆက် လုပ်ငန်းစဉ်ပါ လုပ်ပြီးတင်ပါသည်။ ယခုအခါ ဆိုင်ရှင်ကို အသိပေးရန် MZ member များ ကြိုးစားနေပါသည်။ ဒီနေ့ ညနေလောက်ဆို ဆိုင်ရှင်လဲ သိလောက်ပါပြီ။ မိန်းကလေးများရော ယောက်ျားလေးများပါ အဲ အထူးသဖြင့် ကတော့ မိန်းကလေးများပေါ့ဗျာ။ မိမိသုံးသော စက်တွက် trojan ရှိမရှိ သိရှိစေရန်နှင့် keylogger ရှိမရှိကို သိရှိစေရန် ကိုအင်ဖိုဖရီး အပါအဝင် အခြား သူများ သတိပေးချက်များကို ဖတ်ပြီး သတိနှုင့် သုံးကြစေလိုပါသည်။
MZ member မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုကော ဘယ်လိုအသိပေးရမလဲခင်ဗျာ:106:
Gtalk ကနေအဲ့ဒီလင့်ခ် တွေကိုပို့ပေးရမှာလား:39:
(eng လိုတွေပဲဆိုတော့ ဘယ်လိုပို့ရမှာလဲ မသိလို့မေးတာပါ မှားတာရှိရင်ခွင့်လွတ်ပေးပါ)
ဒီနေ့ည အဲဒီဆိုင်ကိုဖုန်းဆက်ကြည့်ပြီးရင်တော့ အဖြေပေါ်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်
Bravo !!!! Bravo Infofreakz..
ဘရာဗို ... ဗလကြီး ....
မနက်တုန်းက ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တောင်းတာကို ဒီကောင်ကျွန်တော့ကိုကောင်းကောင်းဆဲသွားတယ်:14:
မကျေနပ်လို့သူ့ site ကိုသွားကျုံးပြန်ရင်လဲ အစ်ကိုသိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ hosting က free ဆိုတော့ တစ်ရွာလုံးနဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်အုံးမယ်
Antivirus တွေမရှိပဲ Trojans keylogger ရှာဖို့နည်းလေးရှိရင်ပြောပါအုံး:106:
ဆိုင်တော်တော်များများက Antivirus software မသွင်းထားလို့ပါ
port scanner တစ်ခုခုနဲ့သာဆွဲချလိုက်
ဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်မသိလို့ပါ။ကြည့်တော့ကြည့်လိုုက်တယ်။ ဘာတွေမှန်းမသိဘူးလေ။ ပြီးတော့ မိန်းကလေးတွေသတိထားဆိုတော့ ။နည်းနည်း လန့်သွားလို့။ Anti-virus တင်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာသုံးရင်ရောစိတ်ချရလားဟင်။
သူ့ site က offline လုပ်သွားပါပြီ
(ဆိုင်ရှင်ကို inform လုပ်လို့တော့မရသေးပါ)
စုံစမ်းလို့သိရသလောက်ကတော့ http://tolimoli.net.ms/ က တိုလီမိုလီဆိုတဲ့ကောင်လုပ်တာပါ
ဒါပေမဲ့သူ့ဟာက real address ကို embed လုပ်ထားတာပါ
သူ့ site ကိုတစ်ကယ်တင်ထားတာက ning.com မှာပါ
လိပ်စာအပြည့်အစုံ ကတော့ ဒီမှာပါ
သူ့ site ကို offline ပြထားတယ်
အဲဒီ ဆိုင်ကစက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ infofreakz မှ niak3r6mith ကရှင်းပြီးသွားပါပြီ
ဒီ MZ ထဲမှာပဲ..post တစ်ခု..တင်သွားတာ ..ဖတ်ဖူးသလိုပဲ...
နောက်မှ. porn site ကို..လင့်ပေးသွားလို့..Admin တစ်ယောက်ယောက် က..ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်.
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ဒီမှာသူရေးထားတဲ့ post လင့်ခ်က
ဟုတ်တယ်ဗျ။ သူ့site ကို offline ပြထားတယ်။ wwwဒေါ့statbrain.com နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူ့site အကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့သိရတယ်ခင်ဗျ။
သူက ဘယ်သူလဲ....... ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင် ယုတ်မာရတာလဲ.........
သူ့မှာလည်း မိသားစုနဲ့ပါ......... နှမ၊ အစ်မ မရှိရင်တောင် အမေ တစ်ယောက်ကတော့ရှိမှာပေါ့...... ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးမေးချင်လိုက်တာ.......... ဘာလို့ဒီလို အောက်တန်းကျရတာလဲလို့........:14:
ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာ မတတ်တော့ သူ့ web ကိ်ုတော့ မဆော်တတ်ဘူး...........
ဒါပေမယ့် လူကိုတော့် ကောင်းကောင်းဆော်တတ်တယ်...........
နောက်ပြီး အ၀တ်အစား စမ်း၀တ်တဲ့နေရာတွေမှာ camera တတ်ထားတတ်တဲ့ ဆိုင်တွေ ကို လည်း တတ်နိုင်ရင် သတိပေး ပေးကြပါဦးနော်.............
အရင်နေ့ က သတိပေးတာတွေ့လို့ ကြည့်တော့ ကြည့်လိုက်တယ်....
ဘာလို့ မိန်းကလေးတွေ သတိထားလို့ ပြောတာပါလိမ့် လို့
တော်တော် အကျင့်ပုတ် တာပဲနော်...:14::14:
တော်သေးတာပေါ့ mz ကလူတွေရှိနေလို့
လုလု လဲ အဲဒါမျိုးဆို တီးပစ်ချင်တယ်
နောက်ထပ် online မှာအူကြောင်ကြောင်လုပ်နေတဲ့ငတိတွေရှိသေးတယ်:14:
အစ်ကိုကြီးကလဲ avartor ကြီးပြထားပြီးလာနောက်နေတယ်:D
Thread အသစ်မဖွင့်ချင်တော့လို့ ဒီမှာတင်လိုက်ပြီ
အများသုံး အိမ်သာ အထူးသဖြင့် Cybercafe မှ အိမ်သာသုံးသူများသတိထား။ ဟို Cybercafe ဆိုင်ကတော့ hidden camera တတ်လို့ ပြသနာတက်တယ်ဆိုပဲ။ ဆိုင်နာမည်တော့ မမေးနဲ့တော့
ပတ်ဝင်းကျင်ကို အမြဲ စူးစမ်းတဲ့ အကျင့်တော့လုပ်ထားပေါ့။ hidden camera ထားတဲ့ နေရာက မျက်စိရှင်ရင် ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် Cybercafe မှာ အိမ်သာတက်တာရှောင်ဗျာ။
မလွှဲသာရင်တော့ ကျနော့လိုပဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေ စွပ်တဲ့ ခေါင်းစွပ်ဆောင်ထား။ အိမ်သာထဲ မဝင်ခင် ခေါင်းစွပ် စွပ်ထား။ ထွက်လာမှပြန်ချွတ်လိုက်ပေါ့။ အဲဒီနည်းထက်ကောင်းတာ မရှိတော့ဘူး။
မိန်းကလေးတွေ သတိထားပေါ့။ ကျနော်က ပိုက်ပိုက်ချမ်းသာတော့ သူများ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ငွေလာညှုစ်မှာစိုးလို့ အမြဲဆောင်ထားတာ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ သွားမလုပ်နဲ့နော်။ အိမ်သာကထွက်လာတာနဲ့ မာလကီးသွားမယ်။:D
hidden camera တင်မကဘူး phone camera လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
Cybercafe မှ အိမ်သာတင်မက super market နဲ့ အဝတ်အထည်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေက အဝတ်လဲခန်းတွေလည်း ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်:61:
ဒါကြောင့်သွားသတိ လာသတိ ပါသတိ လဲသတိ နဲ့နေပေါ့ဗျာ:D မဟုတ်ရင်ဟိုmodel လေးလိုနာမည်တွေကြီးနေအုံးမယ်
(နောက်ဆို Hidden camera တွေဘာတွေ တွေ့လို့ကတော့ ဖြုတ်ပြီးရောင်းတာစားဗျို့ သူတို့လည်း ဘာမှပြန်ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး:p)
အဟတ်...:39:မှန်ပါ့ဗျာ:39:...ကင်မရာတွေ လို့ကတော့ ဖြုတ်သာရောင်းစား... ကူညီရာလဲရောက်တယ်...ဝမ်းလည်းဝတယ်.....\_:d/:d
lukwasar wrote: »
အစ်ကို စာအုပ်ဖိုး မရှိလို့ အကြံကြီးပြီနဲ့ တူတယ် ဟီး:d
ဒီ thread ကကျွန်တော်ကစတာဆိုတော့ ရရင် share ခွဲပေးရမယ်နော်:d